Madaxweynaha Soomaaliya oo dhawaan kulankii ugu horeeyay abid la yeeshay RW Israel - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweynaha Soomaaliya oo dhawaan kulankii ugu horeeyay abid la yeeshay RW Israel
July 5, 2016 Puntland Mirror Somalia 0
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Shiikh Maxamuud.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa dhawaan la kulmay Raysulwasaaraha Yuhuuda Benjamin Netanyahu markii kowaad oo labada dhinac ay wadahadal heerkaas ah yeeshaan, sida ilo wareedyo ku dhow Madaxweynaha Soomaaliya u sheegeen wargeyska The Times of Israel.
Yuhuuda iyo Soomaaliya ayaan yeelan wax xiriir ah oo siyaasadeed iyadoo wadanka kuyaala Geeska Afrika oo 100% Muslim Sunni ah kana tirsan Jaamacada Carabta uusan waligiis aqoonsan xukuumada Yuhuuda.
Sarkaal sare oo ku dhow Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh ayaa u cadeeyay wargeyska The Times of Israel in kulanka uu dhacay, si kastoo ay ahaataba sarkaalka ma uusan sheegin in kulanka uu ka dhacay magaalada Talaabiib.
Kulan kale oo u dhaxeeya labada masuul ayaa la qorsheeyay inuu dhici doono mustaqbalka dhow, sida uu sheegay sarkaalka.
Ilo-wareedyo kale ayaa sheegaya in Bishii december ee sanadkii lasoo dhaafay ay jireen kulan ka dhacay magaalada Qudus oo u dhaxeeyay masuuliyiin Soomaali ah iyo saraakiil Yuhuuda oo uu kamidyahay wasiirka dhaqaalaha Yuhuuda.
Saraakiisha Israel oo wargeyska weydiiyay in kulankaas uu dhacay ayaa diiday in ay ka hadlaan mawduucaas.
RW Netanyahu ayaa hadda booqasho ku jooga afar wadan oo kuyaala Bariga Afrika, oo ay kamidyihiin Kenya iyo Ethiopia oo xad la leh dalka Soomaaliya.
[box]Xasuusin: warbixintan wuxuu warsidaha Puntland Mirror kasoo xigtay Wargeyska The Times of Israel oo kamid ah wargeysyada waa weyn ee Israel kasoo baxa.[/box]
July 7, 2016 Somalia’s foreign ministry denies ‘secret meeting’ between Somali President and Israel PM
Madaxweynaha Soomaaliya oo cambaareeyay weerarada argagixiso oo ka dhacay Sucuudiga